China Hydraulic pịa Manufacturer na Supplier | Hanrui
Hydraulic pịa: Hydraulic press bụ otu n'ime akụrụngwa maka ịnwale ike ịkụ ọkpọ.
Ejirila ọtụtụ ngwa igwe eji arụ ọrụ igwe anyị n'ọtụtụ ụlọ ọrụ, wee merie otuto na nnabata ndị ahịa na teknụzụ dị elu na arụmọrụ a pụrụ ịdabere na ya.
Ike mmepụta ụlọ ọrụ:
Na CNC lathe, ndị ọrụ niile agafeela ọzụzụ ọkachamara ọkachamara wee rụọ ọrụ nke ọma na ụkpụrụ ụlọ ọrụ yana ọkọlọtọ ISO9001.
Spraylọ ntu na-agba agba iji hụ na mmepụta ahụ na-egbo mkpa nchekwa gburugburu ebe obibi.
Suzhou Hanrui Electric Co., Ltd. emeriwo aha ọma maka ụlọ ọrụ hydraulic siri ike, ọkpọkọ ASTM, ọnụ ahịa asọmpi na ọrụ ahịa ahịa dị mma (karịchaa ogologo oge ngwa ngwa ngwa ngwa). Ka ọ dị ugbu a, ndị ahịa si Asia, Middle East, North America na Europe kwadoro anyị, na akụrụngwa hydraulic na-abụghị nke ọkọlọtọ / stampụ akụrụngwa enyerela ndị ọrụ aka na asọmpi ahịa.
A na-ejikarị ya eme ihe na ọkpọkọ ule dị ka ọkpọkọ nchara na-enweghị ntụpọ, igwe anaghị agba nchara, titanium alloy pipe, ọla kọpa na aluminom. Company'slọ ọrụ anyị kachasị dị mkpa bụ ịmịpụta akụrụngwa hydraulic iji nye akụrụngwa nnwale dị elu ma dị elu iji mejupụta oghere dị n'ahịa ahụ. Enwere ike kewaa hydraulic pịa ụdị akpaka na ụdị aka. Manualdị akwụkwọ ntuziaka nwere ike ịnwale ọkpọkọ anọ n'otu oge, mana ọ chọrọ ọrụ aka. Ọnọdụ, akara, clamping na ịpị bụ akpaka. Enwere ike gbanwee ogologo nke ọkpọkọ site na 2-15m iji gboo mkpa nke ndị ahịa dị iche iche na-enweghị atụ.
Aticdị akpaaka: naanị otu tube nwere ike ịnwale n'otu oge. Ọkụ na-akpaghị aka na-abanye na ogbe, na-akpaghị aka na-arụ ọrụ ihe, na-akpaghị aka ụdị, ọnọdụ, vacuumizes, akàrà, clamps na presses niile na-akpaghị aka; akụkụ nke obere ogbe na-akpaghị aka na-egosipụta ngwaahịa ndị nwere ezigbo ntụpọ. Ọ na-arụ ọrụ dị mkpa na mmepụta n'ezie. Otu bụ ịchekwa ego, mana ịchekwa ọrụ ma melite ọnụego imepụta ọkpọkọ. Igwe akụrụngwa nke ụlọ ọrụ anyị mepụtara ka a na-ejikarị na nchọpụta ngwaahịa nke ndị na-emepụta ọkpọkọ, ọ bụkwa nchọpụta dị mkpa na nke dị mkpa na ihe ọkụkụ. Ugbu a ọ na-e ọma mepụtara: akwụkwọ ntuziaka ụdị na akpaka ụdị.
Nke gara aga: Air Compressor
Osote: Rt-50fa nkenke Double-Head Chamfering Machine / Gburugburu tube Chamfering Machine
Kwụ Hydraulic Press
Akụrụngwa Hydraulic Press
Nnukwu Hydraulic Press
Enweghị nsogbu Pipe Hydraulic Press
Igwe anaghị agba nchara Pipe Hydraulic Press